CNC axdi qarameedka Machining
Usheeda dhexe, Holder, dunmiiqa
Qaar kale CNC Lathe Machining
Ring, Circle, Flange Collar iyo goomahooda
mashiinada CNC Lathe Machining Computer Control nambarada ama CNC Lathe waxaa loo isticmaalaa si loo soo saaro qaybo by jeestay ul mid ah waxyaabaha la soo xulay iyo quudinta qalab goynta kala duwan galay wax at moolka dheer kala duwan iyo xaglaha. mishiino Tani waxay noo oggolaaneysaa in ay soo saaraan qaybo aad u sax ah la yar ama ma processing sare. Main Products lathe Our biraha qalabka iyo waayo-aragnimo wax lawadaaijyaan Eebahood CNC lathe machining noo saamaxaysa in ay la kulmaan baahida kala duwan ee codsiyada macaamiisha. Si joogta ah soo saara preci ...
mashiinada Computer Control nambarada ama CNC Lathe waxaa loo isticmaalaa si loo soo saaro qaybo by jeestay ul mid ah waxyaabaha la soo xulay iyo quudinta qalab goynta kala duwan galay wax at moolka dheer kala duwan iyo xaglaha. Mishiino Tani waxay noo oggolaaneysaa in ay soo saaraan qaybo aad u sax ah la yar ama ma processing sare.
lathe Our biraha qalabka iyo waayo-aragnimo wax lawadaaijyaan Eebahood CNC lathe machining noo saamaxaysa in ay la kulmaan baahida kala duwan ee codsiyada macaamiisha. Si joogta ah soo saara qaybo bir ah sax oo la dhexroor u duqeeyey sida 0,012 "(0.31 mm) iyo dhererka gaaban sida 0,032" (0.81 mm), our qalabka sidoo kale meel karaa dhererka ilaa 12 "(304.8 mm) iyo dhexroor ilaa 12" (304.8 mm).
Waxaan shaqaaleeyaan our qalabka lathe multi-ujeedada iyo CNC khibrad barnaamij si ay u abuuraan diyaariyeen ah ee qaababka dusha, ka fudud si ay u cylindrical u adag oo ay ka mid yihiin iyo qaababka toobinta. Waayo, ka saarida sax ah biraha, machinists our xirfad isticmaalaan noocyo kala duwan oo cajiib ah farsamooyinka iyo slant munaarad lathe dabacsan sariirta la munaarad 12-meel si ay u gaaraan tiro balaadhan oo ah muuqaalada qayb. Waxaa ka mid ah (balse aan ku koobnayn) jeestay, caajis, qoditaanka, threading (labada gudaha iyo dibadda), dhageeysto gudaha, grooving, wejigaaga grooving, kooxda ka leexdo, muuqaalka, u jeeda, knurling, gooyaa-off, chamfering, qaybsadeen off, iyo radiusing.
CNC Machining lathe sameyn karaa qaabab kuwaas oo sida photos tusay, Sidoo kale, Our Machines lathe qiray CNC ayaa machining qaybo gabal sax iyo bixinta adeegyada qiimaha-daray, waayo, aerospace, isgaadhsiinta, caafimaadka, korontada iyo warshadaha kale tiina oo kale ah.
Previous: Tiir, Pin
Boolal Daawaha Glass fiirinaya
Qaybo ka Aluminum CNC Machining
Aluminum 7075 Qaybo ka CNC Makiinado
Aluminum Service axdi qarameedka 7075 kulankooda Box CNC
Qaybo ka Aluminum CNC Lathe Machining
Qaybo ka Aluminum CNC Machined
Aluminum CNC Threading jeestay Qaybo
Qaybo ka CNC Aluminum
CNC Auto Qaybo Qaybo axdi qarameedka
Qaybo ka CNC Center Makiinado
CNC kartoo Medical Equipment Part
CNC Lathe jeestay Qaybo
Qaybo ka CNC Machined Aluminum
Qaybo ka CNC Machined dhimatay
CNC Machining Qaybo Qalabka Electronic
CNC Machining Part Waayo Qalabka Production
CNC Machining jeestay Part
CNC axdi qarameedka Custom Service
Qaybo ka CNC axdi qarameedka Electronic Qalabka
CNC qiray Aluminum
CNC qiray Part
CNC Swiss Ku marooji Qaybo Machine
Qaybo ka CNC Swiss Ku marooji Machining
Qaybo ka CNC noqdeen
CNC jeestay Sawiridda Qaybo Aluminum
CNC Qaybo Hardware leexinta
CNC jeestay Qaybo Machining Aluminum
CNC jeestay Qaybo Birta
Qaybo ka Custom CNC Lathe Machining
Custom qiray Machining
Glass fiiriyey boolal Waayo Sale
Baahida High CNC Machining Qaybo
Lathe Qaybo ka jeestay
Qaybo ka Machining Aluminum
Birta CNC axdi qarameedka
Mini CNC axdi qarameedka
Caaryada CNC Machine Center
Manufacturer Bushing Nonstandard Gudbinta Qaybo High-Tayada Machined
OEM Birta jeestay Lathe Part CNC Machining
Cayiman CNC Machining
Sax Aluminum Machining
Qaybo ka mid sax CNC Machined
Qaybo ka mid sax Lathe Machined Inner Ring
Qaybo ka mid sax Lathe Machined Pistion Ring
Ku marooji Machine Products
Deminta Qaybo Birta
Isticmaalay CNC Vertical Machining Center
46 Building, Dayangtian Industrial Area, Shajing Community, Bao'an Degmada Shenzhen 518104 CN